Tinoda 28-inch iMac yegore rino! | Ndinobva mac
Tinoda 28-inch iMac yegore rino!
Mushure merunyerekupe rwekupedzisira nezve mukana wekuti Apple inganonoka kuvhura 28-inch iMac yegore rinouya, vazhinji vevashandisi vaApple vari kuisa maoko avo chaiko pamisoro yavo nezvazvo. Mune ino kesi zvinofanirwa kutaurwa izvo runyerekupe saka hapana chakasimbiswa zviri pamutemo uye zviripachena iyo Cupertino kambani haitaure chero chinhu nezvazvo kuchengetedza iko kusava nechokwadi pakati pevashandisi, leaker uye vezvenhau.
Mumakore achangopfuura kuburitswa hakuteedzere hurongwa
Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti Apple zvaburitswa zvichangoburwa zvine chekuita neMac lady hazvisi maererano nenguva nekudaro, izvo zvinoreva kuti kambani haivandudze michina panguva imwechete uye nekudaro inogona kuratidza kuvhurwa kuri padyo kana zvakapesana, kuvhurwa kwekupedzisira.
Makore mashoma apfuura, michina yeApple yaigara ichivandudzwa pakupera kwegore uye dzimwe nguva taitangisa mumwedzi waMay. Asi izvi chii ehe icho chinhu chakakosha mukutangisa kweiyo iPhone zvinorega kuva zvakadaro paMacs.
Tinofanira kurangarira izvozvo muna Chivabvu wegore rino iyo 24-inch iMac modhi ine M1 processor yakavhurwa uye gare gare ipad ine processor imwecheteyo yakavhurwa, saka zvese zvakaratidza kuti kambani iri kushanda mukuvandudza M1 kune anotevera Mac mamodheru.Zvino runyerekupe rwunoratidza kuti vaizosvika nemaIntel processor uye kwegore rinotevera ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac makomputa » IMac » Tinoda 28-inch iMac yegore rino!
Mr. X akadaro
Uye chii chaunoda 28-inch iMac ye? Uri kuronga kuitenga here? Sei kukakavara kwakanyanya nehurongwa hweanokanda? Ndiani ane hanya kana iine kuverenga nguva kana kwete?
Pindura Mr. X
Nyowani Apple yekutengesa rekodhi iyo inowana mari ye $ 81.434 bhiriyoni
MacOS Monterey beta 4 ine Live Text inowanikwa yeIntel neM1 Macs